Home » News » StreamGear Fuses Smartphone iyo Kaamirooyinka loo qoondeeyay ee loosoosaaray Soo Saarida Fiidiyowga ee Live-ka ah ee VidiMo
Xalka cusub ee qalabka-iyo-app wuxuu u rogaa taleefanka iyo ilaha fiidiyowga dibadda meel madal waxsoosaar dhameystiran, taasoo fududeyneysa sidii hore oo aheyd abuuritaanka agab tayo sare leh oo nool.
Noofembar 7, 2019 - Akhrin, PA: Hal abuurayaasha muuqaallada fiidiyowga ah ee ka kala socda xirfadleyda iyo xiiseeyayaasha warbaahinta bulshada ayaa dhowaan heli kara hab wanaagsan oo ay kula wadaagaan aragtidooda dhageysigooda iyagoo u maraya wax soosaar heer sare ah oo tayo sare leh. Xalka xawaareynta ayaa bilaabmaya StreamGear Inc. ayaa ka soo bixi doona qaab xarago leh kulanka berrito ee Shirweynaha Sumcadda StreamGeeks ee ka dhacaya magaalada New York iyadoo la bilaabayo VidiMo, isku-dhafis cusub oo qalab iyo qalab ah oo telefishanka casriga ah iyo isha dibedda ugu beddelaya xarun dhammaystiran, soosaarid fiidiyow casri ah iyo xarun gudbinta.
Bixinta hab fudud oo lagu abuuro oo lagu wadaago ka qeybgalka fiidiyowga tooska ah, nidaamka VidiMo wuxuu awood u siiyaa hal qof oo leh taleefan casriga ah iyo kamarad fiidiyow ah inuu soo saaro ilo badan, qaab-telefishan muujinaya oo toos loogu gudbin karo, la duubi karo ama labadaba. In kasta oo tayada kamarad casriga ahi ay soo hagaagaysay sannadihii la soo dhaafay, haddana wali ma lahan waxqabadka hal-abuurnimada hodanka ah - sida zoomka indhaha, diiradda sare ee muuqaalka iris-ka iyo muuqaalka qoto-dheer ee fiidiyow heersare ah ama kamarad DSLR. VidiMo waxay u ogolaaneysaa dadka isticmaala inay yeeshaan waxa ugu fiican labada adduun, keenaya HDMI isha fiidiyowga ee taleefannadooda casriga ah isla markaana ku daraya kaameradda taleefanka iyo ilaha kale.
VidiMo - the ViDeo director on Mobile - wuxuu awood u siinayaa qofkasta inuu noqdo xiddig fiidiyow warbaahinta bulshada ah ama suxufi muwaadin ah. Isticmaalkeeda ugu fudud, VidiMo wuxuu u oggolaanayaa adeegsadayaasha inay qabtaan dibedda HDMI isha video-ga ah ee macruufka ah ama casriga ah ee Android isla markaana ku shuban. Laakiin VidiMo's ballaaran, muuqaalada horumarsan iyo deg deg, interface dareen leh ayaa sidoo kale u saamaxay soosaarayaashu inay abuuraan aragti muuqaal leh, bandhigyo xirfad-nololeed toos ah waqtiga dhabta ah iyagoon u baahnayn inay wax ka beddelaan oo ay geliyaan wakhti dambe.
Nidaamka VidiMo wuxuu ka kooban yahay qalabka loo yaqaan 'VidiMo Go hardware' iyo barnaamijka VidiMo App ee loogu talagalay macruufka 'iOS' iyo taleefannada casriga ah ee Android. Qaab-dhismeedka cusub ee loo yaqaan 'VidiMo Go' ee qaab dhismeedka jirka ah wuxuu sameyaa xalka wax soo saarka gacanta oo dhammeystiran, oo u shaqeynaya sidii qalab qabashada; ku dhejinta cabir kasta oo taleefanka casriga ah xirfadle ama isboorti / kamarad ficil; iyo u oggolaanshaha meeleyn dabacsan oo taleefanka ah si aad ula falgalaan barnaamijka. VidiMo Go waxay qabataa toos HDMI iyo calaamadaha codka analogga ah ee casriga casriga ah, waxaana ku shaqeeya batari isku-baddelaya, oo dib loo isticmaali karo. Isku-darka qalabka 'VidiMo Go' ee isku dhafan ee gaarka ah ee waxqabadka iyo ergonomics wuxuu horseeday in loo xusho inuu noqdo kama-dambaysta abaalmarinta 2019 International Design Excellence Awards (IDEA) oo ay soo saartay Ururka Naqshadeeyayaasha Wershadaha ee Mareykanka.
Dhanka kale, barnaamijka 'VidiMo App' wuxuu bixiyaa aaladda wax soo saar toos ah oo toos ah taleefanka casriga ah. Bandhig kasta, adeegsadayaashu way iska beddeli karaan inta u dhexeysa liis gooyooyin si buuxda loo cusboonaysiin karo oo isku dhafan fiidiyoow toos ah iyo ilo maqal ah - oo ay ku jiraan kuwa ah HDMI isha iyo taleefanka hore ama gadaal taleefanka - oo leh muuqaallo, qoraal iyo dib-u-ciyaar ah oo ah tiirarno horay loo duubay. Markay tahay waqtigii toos loo toosin lahaa, showga waxaa lagu duubi karaa taleefanka casriga isla markaana si toos ah loogu gudbin karaa adeegyada qololka caanka ah (oo ay ku jiraan YouTube-ka Live, Live, Facebook ™ Live iyo Twitch ™) ama server-ka gaarka loo leeyahay.
VidiMo waa badeecada ugu horeysa ee StreamGear, soosaaraha xalka khibradaha cusub ee wali aad u khibrad badan iyo soo saaraha si diiran diirada u saaraya qalabka dhismaha taasoo u sahleysa dadka isticmaala inay abuuraan fiidiyow tayo sare leh. Kooxda hoggaanka StreamGear waxay ku faantaa taariikh cajiib ah oo guul ah soosaarka fiidiyowga, warbaahinta dhijitaalka ah iyo suuqyada tooska u socda. Maamulaha shirkadda, Darryl Spangler, wuxuu la shaqeeyey tikniyoolajiyada qulqulka tan iyo 1995 wuxuuna sidoo kale u shaqeeyaa sidii madaxweynenimo oo lagu ixtiraamo qaybiyayaal Video Video Qalabka. Aasaasaha StreamGear, Gerard Virga, wuxuu ku jiray warshadaha warbaahinta qulqulka tan iyo markii la aasaasay, iyo 2011 waxaa loo magacaabay Warbaahinta Warbaahinta Liiska majaladda "All-Stars" ee ku qornaa tabarucaadkii uu ka sameeyay garoonka.
“Hadafkeennu waa inaan ka dhigno wax soo saar tayo sare leh oo nool iyo baahi fiidiyow ah oo loogu talagalay qof kasta oo ka mid ah kuwa xiiseeya ilaa xirfadleyda khibradda leh, sidaa darteed waxay la wadaagi karaan aragtidooda iyo fikradooda adduunka si ay uga qeybgalaan, qaabab hal abuur leh,” ayuu yiri Spangler. “VidiMo waa tillaabada koowaad ee howgalkeenna, jawaab celinta aan ka helnayna hadda waxaan ku jirnaa mudaaharaadyo gaar ah. Ma jiraan wax kale oo suuqa ka jira oo sameeya wax walba oo VidiMo qaban karto, waana ku faraxsanahay inaan si rasmi ah u soo bandhigno markii ugu horreysay sidaa darteed soo-saareyaashu waa u arki karaan naftooda.
"Aaladaha warbaahinta bulshada ayaa ka dhigayay qaybinta tooska ah suurtagal malaayiin isticmaale, laakiin qaadashada awoodooda nololeed waxaa xaddiday la'aanta qalabyo fudud oo ay ku abuuraan bandhigyo tayo sare leh oo muujinaya nuqullo la duubay, oo la soo saaray," . "VidiMo way beddeli kartaa tan oo waxay u noqotaa wax ku ool ah soosaarka tooska ah ee wax soo saarka si ay xitaa u sii weynaato iyada oo awood u siineysa isticmaaleyaasha si sahlan oo ay u abuuri karaan is-soo-saaris, heer-baahin, bandhigyo toos ah."
Helitaanka Ganacsi ee VidiMo ayaa la rajeynayaa rubuca hore ee 2020. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan VidiMo, fadlan booqo www.streamgear.io.
Ku saabsan StreamGear - StreamGear (www.streamgear.io) waa mid diirada saaraya hormarinta aaladaha u sahlaya dadka isticmaala inay abuuraan fiidiyow tayo sare leh. Kooxda hoggaanka shirkaddu waxay leedahay wax ka badan shan sano oo khibrad u leh soo saarista fiidiyowga, warbaahinta dhijitaalka ah iyo suuqyada tooska u socda. Wax soo saarkii ugu horreeyay ee StreamGear, VidiMo, wuxuu u rogaa taleefanka casriga ah iyo fiidiyowga qaab buuxa, soo saarid fiidiyow muuqaal leh iyo xarun gudbinta, taas oo ka fududeyneysa weligeed xirfadleyda iyo xiiseeyayaasha inay abuuraan oo wadaagaan ka qeybgalka fiidiyowga tooska ah.
Xuquuqda daabacaadda 2019 StreamGear Inc. Dhamaan astaamaha ganacsiga waa hantida milkiileyaashooda. Tilmaamaha, qiimeynta, helitaanka iyo tilmaamaha ayaa lagu beddeli karaa ogeysiis la'aan.
Ku qor leexo Communications
posts Latest by Communications qor noqda (arki dhan)
StreamGear Keenista Heerka Xiga, Soosaarka Muuqaalka Casriga ah ee Casriga ah ee loo yaqaan 'Smartphone-Streaming Video Production' ee loo yaqaan 'CES 2020' - December 12, 2019
Magewell to Premiere Ultra-Compact, 12G-SDI M.2 Capture Card at ISE 2020 - December 10, 2019
StreamGear Fuses Smartphone iyo Kaamirooyinka loo qoondeeyay ee loosoosaaray Soo Saarida Fiidiyowga ee Live-ka ah ee VidiMo - November 7, 2019
AV Broadcast Engineer Broadcast Engineering qabtay Graham Chapman Prmoted toEditor wariye LIVE + wax soo saarka Reporter casriga warbaahinta bulshada Spears & Fiilooyinka socodka biyaha Streaming Bedelaha TV Technology Ultra HD Forum Video Ciidamada Video Engineer VidiMo	2019-11-07
Previous: RED BEE SUCCESSFULLY OO KHATARTA UK KA BILAASH LIVE XARUNTA XUQUUQDA 2019 RUGBY CUP SI AY UGU SAMEEYSAA MACLUUMAADKA Millionion ee loo yaqaan '12.8 MILLION'
Next: Nooca loo yaqaan 'Blackmagic RAW Format' ee loo adeegsado Wejiga 'Indie Science Fiction Thriller', Xariirka